कर को हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki रोक्काको कर
कर छुट के हो?
तपाईं निश्चित रूपमा संग हुनेछ रोक्काको कर र आफैमा कर कर एक आयकर हो। त्यहाँ करणको विभिन्न स्रोतहरू छन् जुन सामान्यतया जर्मनीमा कानून र विदेशी कर कानूनमा विनियम गरिन्छ। यो कर विदेशी कर कानूनको क्षेत्रमा प्रतिबन्धित छ, किनभने सम्बन्धित कर दायित्व पनि प्रतिबन्धित छ। तिनीहरू आफैले मात्र यो कर ध्यान दिनेछन्, यो कर मात्र कुनै विशेष प्रयोजन बिना स्रोत मा राखिएको छ। तपाईंको लागि, होल्ड कर कर एक सामान्य कर हो किनभने, तपाईंको वेतन कर मात्र नियोक्ता द्वारा रोकिएको छ र यो कर पनि स्रोत कर को भाग हो। विशेष महत्वको कर हो भने, यदि उत्पन्न हुन्छ भने, उदाहरणका लागि, पूंजीगत आय बाट। तपाईंले पहिले नै एकपटक एक छुट अर्डरमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ, उदाहरणका लागि, यदि तपाईंको बचत अनुबंध छ र कम कर दरहरुमा कर भुक्तानी गर्न चाहानुहुन्छ।
स्रोत कर हटाउँदा यसले कसरी काम गर्दछ
यदि तपाइँ एक रोजगार सम्बन्धी सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने, तपाइँ पेरोल कर तिर्नुहोस् र तपाईंको आयमा यो करको दरले एक निश्चित तालिका पछि वित्तीय कार्यालयमा मात्र भुक्तानी गरेर भुक्तानी गरिन्छ। यो वेतन कर, जस्तो कि मैले भन्यो, एक स्रोत कर। तपाईं यस प्रकारको बारे चिन्ता गर्नुपर्दैन, किनकि तपाईंको नियोजकले कटौती गर्न रकमको सही रकम भुक्तान गर्दछ, र तपाइँको सकल वेतन यस्तो करको रकमको लागी जिम्मेवार छ। तर त्यहाँ धेरै कारकहरू छन्। उदाहरणका लागि, पारिवारिक स्थिति, बालबालिकाको लागि बालवालिका र काम गर्न यात्रा, त्यसपछि त्यसपछि स्रोत करमा कर को मात्रा घटाउनुहोस्। तपाईंले पहिले नै यो महसुस गर्नुभयो कि यी करहरू सधैं मासिक आधारमा कमाउन आयमा लिइन्छ। पूंजी लाभ र चासो पनि यस कराधान अन्तर्गत पर्दछ। यी करहरूको रकम रकमको सामान्य मूल्याङ्कनलाई अनुमति दिँदैन। पहिले नै उल्लेख गरिएको, व्यक्तिगत शर्तहरू सधैं चीजको उपाय हो। एकै समयमा, लागू कर कानून रकम निर्धारण गर्न लागू भएको छ। नियोक्ता अवस्थित तालिकाहरू द्वारा निर्देशित गरिएको छ, जुन अब डिजिटल रूपमा प्रयोग गरेर करहरू ट्राभल गर्न प्रयोग गरिन्छ। पूंजीगत लाभको सन्दर्भमा करको रूपमा कर, यो केही फरक छ।
रकम फिर्ता र भुक्तानी गर्ने अन्य नियमहरू
तपाईं अहिले जान्नुहुन्छ, कमाएको सबै आय कर लगाउनु पर्छ। कर कानूनमा नियमहरूको एक व्यापक सेट छ। अपवादहरू यहाँ अनुमति छ, र सबै महत्त्वपूर्ण नियमहरू एक सन्तुलन सम्बन्धी सम्बन्ध बनाउँदछ, जुन यसको मात्रामा विधायकले निर्धारण गर्दछ। पहिले नै उल्लेख गरिएको छ, कर कानून अन्तर्गत विदेशी आय र आय छुट कर कर मा कर योग्य छ। यहाँ धेरै सर्तहरू अवस्थित छन् र तपाईंले कानूनी ढाँचालाई अनदेखी गर्नुहुनेछ। तथापि तपाईलाई चासो राख्नुपर्छ, तथापि, करको स्रोतको रूपमा कटौती गरिएको करको निश्चित रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। करदाताको रूपमा, तपाईले विशेषज्ञ सल्लाह खोज्नु पर्दछ, र सानो पूंजी योगदानको साथ पनि, पहिले नै एक छूट आदेश छ, ताकि कर कानूनमा कम को लागी रकम बैंक द्वारा करको रूपमा कर कार्यालयमा पठाइएको छैन। उनीहरूले पनि ध्यान दिनुहोस् कि स्रोत करहरू स्थायी रूपमा उपलब्ध छन्, किनभने राज्यले यी करहरूमा सबै आयकर चासो राखेको छ र यसैले यसको आयले बलियो बनाउँछ। यस करों संग पूंजी लाभ, मजदूरी, धेरै अन्य आय को आय छ, र तपाईं यिनी करहरु संग गर्न को लागी केहि छ, किनभने नियोक्ता र बैंकोंले मात्र यी करहरु प्रासंगिक कर कार्यालयहरु लाई पास गर्छ। केवल कर छुट गरेर तपाईं कर, कर कानून अनुसार, यो भुक्तानी रेट भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, र छुट्टै शुल्क को वेतन शुल्क को प्रतिपूर्ति गर्दा विशेष खर्च वा विज्ञापन खर्च को रूप मा गरिन्छ।
अघिल्लो लेखव्यक्तिगत ऋण
अर्को लेखस्वीकृति क्रेडिट